FTIR Instrument_ Product Presentation
ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 နဲ့ တချို့𝗜𝗻𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 တွေရဲ့ 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 & 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 နှစ်ခုလုံးကို 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝘆လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စက်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 𝗙𝗼𝘂𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝗿𝗲𝗱 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်....
ဒီ 𝗙𝗧𝗜𝗥 စက်လေးကို ...
✅ 𝗙𝗼𝗼𝗱 & 𝗕𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲
✅ 𝗣𝗼𝗹𝘆𝗺𝗲𝗿 & 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹
✅ 𝗣𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝘀 & 𝗥𝘂𝗯𝗯𝗲𝗿𝘀
✅ 𝗘𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 အစရှိတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေနဲ့ 𝗥&𝗗 တွေမှာ အများဆုံး အသုံးပြုကြပါတယ်ရှင်။
𝗨𝗦 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ကိုအခြေခံပြီး 𝗧𝗵𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗙𝗶𝘀𝗵𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰 ကနေ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 ဖြစ်ပြီးတော့ တိကျ၊ မှန်ကန်၊ မြန်ဆန်ပါတယ် 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆ပိုင်းမှာလဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ဒီလို တိကျ၊ မှန်ကန်၊ မြန်ဆန်ပြီး အရည်အသွေးပိုင်းမှာလဲ စိတ်ချရတဲ့ 𝗙𝗼𝘂𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝗿𝗲𝗱 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿လေးရဲ့အကြောင်းကို အောက်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါရှင်။
အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱.၏ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿 မှလည်းကောင်း၊ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱၏ 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 မှလည်းကောင်း၊ အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်.....
+𝟵𝟱 𝟵 𝟵𝟳𝟳 𝟵𝟬𝟴𝟳𝟲𝟰
+𝟵𝟱 𝟵 𝟳𝟵𝟳𝟳𝟴𝟭𝟬𝟴𝟯
+𝟵𝟱 𝟵 𝟰𝟬𝟮 𝟲𝟬𝟬𝟮𝟬𝟰
Product Presentation of UV Vis Spectrophotometer
ဒီနေ့မှာတော့𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜, 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥, 𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐞𝐮𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥, 𝐅𝐨𝐨𝐝 & 𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞𝐬 စတဲ့ 𝐀𝐫𝐞𝐚 တွေမှာရှိတဲ့ 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 နဲ့ 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 & 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 တွေမှာ 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩𝐬, 𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐮𝐧𝐝, 𝐏𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐀 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 စတဲ့ 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐞𝐬 တွေကို 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 လုပ်ပေးတဲ့ 𝐔𝐕-𝐕𝐢𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 လေး အကြောင်းကို တင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
𝐔𝐒𝐀 အခြေစိုက် 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 ကနေ ထုတ်လုပ်ထားပြီး 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 ဖြစ်တာနှင့်အညီ အရည်အသွေးပိုင်းမှာလည်း တိကျ၊မှန်ကန်𝐥 မြန်ဆန် ၍ လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ဆိုရင်ဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ထိုသို့သော အကြောင်းရင်းများမှာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜, 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 (၂)မျိုးဖြစ်တဲ့ 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐲𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐕-𝐕𝐢𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 များရဲ့ အကြောင်းကို အောက်ပါ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးရှင်။
အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨., 𝐋𝐭𝐝.၏ 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 မှလည်းကောင်း၊ 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨., 𝐋𝐭𝐝၏ 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 မှလည်းကောင်း၊ အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်.....
𝐘𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞
+𝟗𝟓 𝟗 𝟒𝟓𝟒 𝟏𝟗𝟑𝟖𝟐𝟗
+𝟗𝟓 𝟗 𝟗𝟕𝟕 𝟗𝟎𝟖𝟕𝟔𝟒
+𝟗𝟓 𝟗 𝟒𝟐𝟎 𝟎𝟐𝟕𝟗𝟖𝟏
+𝟗𝟓 𝟗 𝟐𝟓𝟎 𝟑𝟖𝟓𝟏𝟏𝟓
+𝟗𝟓 𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟔𝟎𝟎𝟐𝟎𝟒
Biosafety Level2plus (BSL 2+) Laboratory Project at University of Medicine (1) Yangon
ကျွန်တော်တို့ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 နှင့် 𝗙𝗶𝘀𝗵𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰 (𝗨𝗦𝗔) တို့ ပူးပေါင်းကာ 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗢𝗳 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 (𝟭) ရှိ 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗶𝗹𝗹, 𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 & 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ 𝗕𝗶𝗼𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 𝗟𝗲𝘃𝗲𝗹 𝟮 𝗽𝗹𝘂𝘀 ( 𝗕𝗦𝗟 𝟮+) 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းအား အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.........
အဆိုပါ 𝗕𝗦𝗟 𝟮+ 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 အား 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 ၏ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများမှ
𝟭. 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗖𝗲𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺
𝟮. 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗣𝗼𝗹𝘆𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗪𝗮𝗹𝗹 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺
𝟯. 𝗣𝗼𝗹𝘆𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗣𝗿𝗲-𝗽𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗱 𝘀𝘁𝗲𝗲𝗹 𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁 𝗦𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗼𝗼𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄
𝟰. 𝗔𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝘂𝗺 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗿𝗻𝗲𝗿 (𝗠𝗮𝗹𝗲 & 𝗙𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲)
𝟱. 𝟯𝗺𝗺 𝘁𝗵𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗲𝗮𝘃𝘆 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 & 𝗪𝗲𝗮𝗿 𝗥𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗘𝗽𝗼𝘅𝘆 𝗙𝗹𝗼𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴
စသည့် အဆင့်မှီ 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝘀 များအသုံးပြုပြီး 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗥𝗼𝗼𝗺 များတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။
၁) သက်ဆိုင်ရာ 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 အမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်သော 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 & 𝗡𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗥𝗼𝗼𝗺 များရရှိရန်၊
၂) 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 များသက်တောင့်သက်သာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန်၊
၃) ကျန်းမာရေးမထိခိုက်စေရန်နှင့် ဓါတ်ခွဲနမူနာများ မပျက်စီးစေရန်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးသော လေထုရရှိဖို့အတွက် 𝗛𝗘𝗣𝗔 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 ထည့်သွင်းတပ်ဆင် ထားသော 𝗜𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱 (𝗛𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 & 𝗔𝗶𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴 - 𝗛𝗩𝗔𝗖) စက် အား အသုံးပြုတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။
𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝗼𝗺 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 နှင့်အညီ 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 ပြုလုပ်ထားသော 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗙𝘂𝗿𝗻𝗶𝘁𝘂𝗿𝗲 များကိုလဲ အသုံးပြုပေးထားသည့်အပြင် -
𝟭. 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗪𝗢𝗥𝗞
𝟮.𝗣𝗹𝘂𝗺𝗯𝗶𝗻𝗴 & 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗪𝗼𝗿𝗸
𝟰.𝗗𝗔𝗧𝗔 & 𝗩𝗢𝗜𝗖𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗞
𝟱.𝗟𝗮𝗯 𝗙𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀 & 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 စသည့် လုပ်ငန်းများအားလဲ အဆင့်မှီစွာထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အထူးပင် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာ...
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱. ၏ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿 မှလည်းကောင်း၊ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲၏ 𝗪𝗲𝘀𝗶𝘁𝗲 တွင်လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......
Delta's Finishing Laboratory Project In West Yangon Technological University
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့၁၅နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အား ကျွန်တော်တို့ Delta Science Co. Ltd မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ထို့အတူ Delta Science Co.,Ltd မှ အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်အား တင်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့သော Edibon ရဲ့ communication equipment တွေ အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
EDIBON ဆိုတာကတော့ စပိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်company ဖြစ်ပြီး Engineering နယ်ပယ်မှာ theory ပိုင်း practical ပိုင်းတွေအတွက် လက်တွေ့သင်ကြားပေးလို့ရတဲ့
Engineering & Technical Teaching Equipments တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ Company ပဲဖြစ်ပါတယ်။
EDIBON မှာ units ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး Technological universities, Vocational Training institutes & other Research area စတဲ့ Department အလိုက် လက်တွေ့ခန်းသုံး Equipment များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Delta science company အနေဖြင့် EDIBON product ကို 2018 မှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တင်သွင်းဖြန့်ချီ ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ Communication Equipment တွေဟာဆိုရင်...
Communication Equipment တွေကိုတော့နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၊ သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနဌာန နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ Electronic ဌာနတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Communication Equipmentတွေကို ဆရာ/ဆရာမများမှ ကျောင်းသား/သူများအား theoryပိုင်းနဲ့ practicalယှဉ်တွဲသင်ကြားပေးတဲ့အခါ teaching equipment အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ဝင်စားလို့ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက messenger ကနေမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အခုလို အချိန်ပေးပြီး ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါကြီးမှ လဲ ကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း ကျွန်တော်တို့ Delta Science Company မှနေပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။
HPLC Product Presentation
Pharmaceutical, Environmental , Forensic, Clinical and Food & Flavors စတဲ့ Area တွေမှာ Organic, Inorganic တွေရဲ့ Compound ပါဝင်နှုန်းတွေကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာဖြင့် တိုင်းတာသိရှိလို့ရနိုင်တဲ့ High Performance Liquid Chromatography Instrument လေးအကြောင်းကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
USA အခြေစိုက် Thermo Fisher Scientific ကနေ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရည်အသွေးပိုင်းမှာလည်း တိကျ၊ မှန်ကန်၊ မြန်ဆန်၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Hardware ရော Software ရောမှာပါ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ HPLC လေးရဲ့ အကြောင်းကို အောက်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါ ခင်ဗျာ ...
KingFisher Flex Automated Purification System
အားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်သော ခရစ်စမတ်အချိန်ကာလလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်....
ဒီနေ့မှာတော့ လူကြီးမင်းတို့ကို ThermoFisher ကထုတ်ထားတဲ့ Best Seller ဖြစ်​တဲ့ Automated Extraction စက်က​လေးနဲ့ မိတ်ဆက်​ပေးပါရ​စေရှင်...
-DNA, RNA နှင့် Protein ​တွေကို 96- samples အထိ တစ်ပြိုက်နက်တည်း အချိန်တို ( ၃၀-၄၅ မိနစ်) အတွင်း ထုတ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်​တော့ KingFisher Flex က ကူညီ​ပေးဖို့ အသင့်ရှိ​နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်နော်....
96- Magnetic Head Format နဲ့ KingFisher Flex စက်​လေးရဲ့ စွမ်း​ဆောင်ရည်​တွေက​တော့ ......
(1) Compact System ဖြစ်ခြင်း
(2) Good Quality Result ရရှိနိုင်ခြင်း
(3) High Throughput ကို ​ဆောင်ရွက်​ပေးနိုင်ခြင်း
(4) Standalone လုပ်​ဆောင်နိုင်ခြင်း
(5) BindIt software အကူအညီနဲ့ Protocols ​ပေါင်းများစွာကို စက်ထဲသို့ transfer လုပ်ပြီး run နိုင်ခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်....
Magnetic Separation Technology ကို အသုံးပြုထားတဲ့ ဒီစက်က​လေးကို သုံးမယ်ဆိုရင်​တော့ Magnetic Beads ပါဝင်တဲ့ MagMax kits နဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုရပါမယ်။
မိမိ ထုတ်ယူချင်တဲ့ Sample types ​ပေါ်မူတည်ပြီး MagMax kits များစွာကို www.thermofisfer.com/kingfisherkits မှာ ရှာ​ဖွေ အသုံးပြုနိုင်သလို တခြား magnetic particles ပါဝင်တဲ့ မည်သည့် brand နဲ့မဆို တွဲဖက် သုံးနိုင်တဲ့ Open-type Instrument ​လေး ဖြစ်ပါတယ်။
Service Labs, Biopharma Labs, Core Labs နှင့် Academic Labs ​တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Easy-to-use ဖြစ်တဲ့ KingFisher Flex ရဲ့ အသုံးပြုပုံ​လေးကို Video မှာ ဝင်​ရောက်​လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ထပ်မံပြီးအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Delta Science Co., Ltd.ရဲ့ Facebook Page Messenger မှလည်းကောင်း၊ Website မှလည်းကောင်း၊ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။
Ph: +959454 193829,
+ 959964 448207
Ph: +959895 071023
Presentation Highlights for General Laboratory Products
ဒီ 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 ေလးထဲမွာ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱. မွ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္သည့္ 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 နဲ႔ပတ္သက္သည့္ 𝗟𝗮𝗯 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗮𝗯 𝗙𝘂𝗿𝗻𝗶𝘁𝘂𝗿𝗲 အေၾကာင္းကို အဓိကထားရွင္းလင္းေျပာျပထားပါတယ္…
 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 နဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ရနိုင္မယ့္ စက္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ တင္သြင္း သည့္ ကုမၸဏီ၊ တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း၊
 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹 နဲ႔ပတ္သက္သည့္ 𝗚𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝘀𝗶𝘇𝗲 အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီႏွင့္ တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း၊
 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗙𝘂𝗿𝗻𝗶𝘁𝘂𝗿𝗲 နဲ႔ပတ္သက္ျပီးရရွိနိုင္တဲ့ 𝗕𝗲𝗻𝗰𝗵 𝘀𝗶𝘇𝗲, 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအျပင္ 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗟𝗮𝗯 𝗮𝗻𝗱 𝗤𝘂𝗶𝗰𝗸 𝗟𝗮𝗯 မ်ားကိုလည္း 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱. မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို တင္ျပေပးထားပါသည္။
ထပ္မံၿပီးအေသးစိတ္သိရွိလို၍ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူလို၍ျဖစ္ေစ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱 ၏ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿 မွလည္းေကာင္း၊ 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္။
+𝟵𝟱 𝟵 𝟰𝟮𝟬 𝟬𝟬𝟱𝟭𝟲𝟯
#𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲_𝗟𝗮𝗯_ 𝗤𝘂𝗶𝗰𝗸_ 𝗟𝗮𝗯
Technology of Edibon
ဒီနေ့မှာတော့ 𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ရဲ့ 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 ဆိုတာကတော့ စပိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 ဖြစ်ပြီး 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 နယ်ပယ်မှာ 𝗧𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 ပိုင်း 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 ပိုင်းတွေအတွက် လက်တွေ့သင်ကြားပေးလို့ရတဲ့𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 & 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 မှာ 𝗨𝗻𝗶𝘁𝘀 ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀, 𝗩𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲𝘀 & 𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗔𝗿𝗲𝗮 စတဲ့ 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 အလိုက် လက်တွေ့ခန်းသုံး 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 အနေဖြင့် 𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ကို 𝟮𝟬𝟭𝟴 မှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တင်သွင်းဖြန့်ချိ ရောင်းချလျှက်ရှိပါတယ်....
𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသလဲ?
𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ကိုတော့နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၊ သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနဌာန နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹, 𝗠𝗲𝗰𝗵𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹, 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰, 𝗠𝗲𝗰𝗵𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰, 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 နဲ့ 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴ဌာနတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ကို ဆရာ/ဆရာမများမှ ကျောင်းသား/သူများအား𝗧𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 ပိုင်းနဲ့ 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 ယှဉ်တွဲသင်ကြားပေးတဲ့ 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 တွေကို 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲အနေနဲ့ချိတ်ဆက် အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
𝗘𝗱𝗶𝗯𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ရဲ့ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးက ဘာပါလဲ?
ဆရာနဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹/ 𝗧𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 တွေကို𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲မှ တဆင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာသင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ 𝗟𝗮𝗯 တစ်ခုလုံးကိုလဲ 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 ကနေထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ဝင်စားလို့ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱 ရဲ့ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿 မှလည်းကောင်း၊ 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 မှလည်းကောင်း၊ အောက်ပါရုံးဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
ကြည့်ရှုပေးကြသူအပေါင်း အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးမှလည်း ကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱. မှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....
+𝟵𝟱 𝟵 𝟰𝟱𝟰𝟭 𝟵𝟯𝟴𝟮𝟵
+𝟵𝟱 𝟵 𝟰𝟮𝟬𝟭 𝟱𝟬𝟬𝟱𝟵
+ 𝟵𝟱 𝟵 𝟵𝟳𝟳𝟵 𝟰𝟭𝟴𝟴𝟮
+𝟵𝟱 𝟵 𝟴𝟵𝟱𝟬 𝟳𝟭𝟬𝟮𝟯
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 : 𝘄𝘄𝘄.𝗱𝗲𝗹𝘁𝗮𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝗺𝗺.𝗰𝗼𝗺
Things You Should Know Before Buying Refrigerator and Freezer For Your Laboratory
ကျွန်တော်အခု 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 မှာ 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 လုပ်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗿𝗲𝗳𝗿𝗶𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗿𝗲𝗲𝘇𝗲𝗿 များကိုဝယ်ယူရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ...
ဒါ့အပြင် 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗿𝗲𝗳𝗿𝗶𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 ၊𝗳𝗿𝗲𝗲𝘇𝗲𝗿နှင့် 𝗗𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰 တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်များ၊
𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 ၊ 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗯နှင့် အခြားသော 𝗹𝗮𝗯 တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀၊ 𝗿𝗲𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁 ၊ 𝗸𝗶𝘁𝘀 တွေကို 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲လုပ်ဖို့နှင့် မိမိတို့အသုံးပြုချင်တဲ့ 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 အမျိုးအစားတွေအပေါ်မူတည်ပြီး 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 လုပ်နိုင်မယ့် 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗿𝗲𝗳𝗿𝗶𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗿𝗲𝗲𝘇𝗲𝗿 အမျိုးအစားများကိုလည်း ယခု 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼လေးမှာ 𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ...
ဒီ𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 လေးက လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 တွေမှာ 𝗥𝗲𝗳𝗿𝗶𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 နဲ့ 𝗙𝗿𝗲𝗲𝘇𝗲𝗿 များကိုမှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱 ၏ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿 မှလည်းကောင်း၊ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 ၏ 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 မှလည်းကောင်း အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
+𝟵𝟱 𝟵 𝟳𝟵𝟵 𝟭𝟯𝟰𝟴𝟭𝟯